01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 348 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
21 / 08 / 2021 21 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 285 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Agatha Harkness, ကပ္ပတိန် Marvel, ကပ္ပတိန် Marvel 2, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, မော်နီကာ, မော်နီကာရက်ဘို, ဦး ခေါင်းခွံ, superhero, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, WandaVision
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 266 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Mark Tranter ပါ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, အဆိုပါ LEGO Group, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 298 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Agatha Harkness, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, Baron Strucker, Captain America နှင့် Winter Soldier, Captain America: ပြည်တွင်းစစ်ကြီး, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, မွေခှေး, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, Pietro Maximoff, Quicksilver, Scarlet စုန်းမ, ဝမ် Maximoff, WandaVision, X-Men
31 / 07 / 2021 31 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 381 Views စာ0မှတ်ချက် 71031, 71031 Marvel စတူဒီယို, ပုရွက်ဆိတ်-Man, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, lego coll ပါ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Spider-Man, Marvel, ပတေရုသက Parker, Scarlet စုန်းမ, စကော့လန်း, Scarlet စုန်းမ, နောကျတှဲရထား, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
28 / 07 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 551 Views စာ0မှတ်ချက် 71026, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Dc, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey